အချစ်နှင့် သူ့အမည် | Ta Pwint Pan
အချစ် နှင့် သူ၏အမည် စာစု (၁)
သည်တစ်ခါကျွန်တော်တင်ပြချင်တာက (ဆရာကျွန်တော်နဲ့ဒီမိန်းကလေးနဲ့ အဆင်ပြေမလား မပြေမလား၊ ဆရာ သမီးနဲ့သမီးချစ်သူနဲ့ အဆင်ပြေမပြေသိချင်လို့ပါ။)စသည်ဖြင့် မေးလေ့ရှိသူတွေအားလုံးအတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ နဲနဲဂွကျတာကတော့ ဒီကဏ္ဍကရေးမယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်းဆောင်းပါးပေါင်း ၆၄ပုဒ်ရေးရမယ့် အနေအထားဖြစ်ပြီး..အတိုချုပ်နိုင်သမျှ စာကိုလျော့ပစ်မယ်ဆိုရင်တောင် အနဲဆုံး ပုဒ်ရေ ၂၀ကျော် ရေးရမယ် ထင်ပါတယ်။ မလွယ်ပါ။
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်း လက်တွေ့တိုက်ဆိုင်တွေ့မြင်ရသော အကြိမ်ရေများအရ အချို့ကိုသေချာတပ်အပ်ဖော်ပြရေးသား နိုင်ပြီဖြစ်သော်လည်း အချို့ကိုမူ အတွေးဖြင့် ခန့်မှန်းရုံမျှသာ ခန့်မှန်း နိုင်သေးခြင်း ဖြစ်သည်။ ယင်းကို အတိအလင်းဝန်ခံအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်တွင်ပြည့်စုံသော အနေ အထားအထိ လေ့လာသု တေသနပြု နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ။ နောင်အခါ ကျွန်တော့်ရည်းမှန်းချက်အတိုင်း T-Group မြန်မာ့ရို့းရာဗေဒင်ပညာ သုတေသနအသင်းကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပါမူ လက်တွေ့လေ့လာမှုခရီးသည်ပိုမိုပြီးများစွာတွင်ကျယ်လာနိုင်မည်ဟု ထင်ပါသည်။ ကြွားလှချေလား ကြီးကျယ်လှချေလားဟုဆိုလျှင် ဟုတ်ကဲ့ ကြီးကျယ်ပါသည်ခင်ဗျား။ သေးနှပ်လျှင် သိမ်ဖျင်းသွားတတ်သောကြောင့် ဟုသာ ဆိုကြပါစို့။ စကားလမ်းက တစ်ခြားကမ်းကိုဆိုက်တော့မည်။ လိုရာကို ဦးတည်ကြပါစို့။ ယခုကဏ္ဍတွင်စာရေးသူအနေနှင့် နာမည်နှစ်ခုကိုတွဲပြီး ကြည့်ရှုခြင်းကဏ္ဍကိုရေးသားမည်ဖြစ်ပါသည်။ လေ့လာကြည့်ပါခင်ဗျား။ နာမည်အဖျားစာလုံး နာမည်အဖျားစာလုံးဟူသည်မှာ နာမည်၏ အဆုံးစာလုံးကိုဆိုလိုပါသည်။ ဥပမာ သိန်းမြင့်တွင် မြင့်သည်အဖျားစာလုံးဖြစ်သည်။ နွယ်နီထွန်းတွင် ထွန်းသည် အဖျားစာလုံးဖြစ်သည်။
လူကြီး နှင့် ကလေး အတွဲ အကြောင်း
(၁) နာမည်အဖျားစာလုံး စနေနံ(တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န) နှင့် နာမည်အဖျားစာလုံးတနင်္လာနံ(က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) ဖြင့် မှည့်ခေါ် ထားသော သူနှစ်ဦး ၏
လက်တွဲရေးကဏ္ဍအကြောင်း။ ဥပမာအားဖြင့် စိုးမြင့်ထွန်း နှင့် ဇင်မီမီကျော်၊ နေထက် နှင့် ယမင်းခင်၊ ၀တ်ရည်တိုး နှင့်
မိုးမြင့်ကျော်။ စသည်ကဲ့သုိ့သော အတွဲများ ဖြစ်သည်။ အထက်ပါ လက်တွဲဖော်နှစ်မျိုး၏ လက်တွဲရေးကဏ္ဍသည် ခက်ခဲလှသော
ကဏ္ဍတစ်ရပ်ဟုဆိုချင်ပါသည်။ နာမည်အဖျားစာလုံးစနေ သမားတို့သည် လေးနက်စွာလုပ်ဆောင်တတ်ပြီး သူတစ်ပါးကိုဖိအားပေးတတ်သူများ
ဖြစ်နေခြင်း နှင့် နာမည်အဖျားစာလုံးတနင်္လာသမားတို့မှာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေထိုင်တတ်မှု အလေးအနက်မတွေးမှု၊ ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ် သည်ကို ကြောက်ရွံ့တတ်ခြင်း စသည်တို့မှာ ဆန့်ကျင်ဘက်အသွင်ကိုဆောင်နေ၏။ ဆူတတ်သူ ဝေဖန်တတ်သူ နှင့် နားပူမခံနိုင်သူ အပြစ်တင်မှာစိုးသူတို့ လက်တွဲရခြင်းမျိုး ဖြစ်နေတတ်၏။ ထို့ထက်ပိုပြီး ခိုင်းနှိုင်းဥပမာပေးရပါမူ နာမည်အဖျားစာလုံးစနေသမားများက အနက်ရောင်နှင့် အလားသဏ္ဍန်တူပြီး၊ နာမည်အဖျားစာလုံး တနင်္လာသမားတို့မှာမူအဖြူရောင်နှင့်အလားသဏ္ဍန်တူပြန်၏။ အဖြူရောင်သမားက
နာမည်အဖျားစာလုံးတနင်္လာသမား(ခ) အုပ်စု သမားတို့က လွတ်လပ်မှုကိုမြတ်နိုးပြီး..စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရှာလိုကြ၏။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနေထိုင်ပြီး အသင်းအဖွဲ့ များနှင့်သာပျော်မွေ့လိုကြ၏။
နာမည်အဖျားစာလုံး စနေနံသမား(က) အုပ်စုသမားများကမူ ..လူသူနှင့် ကင်းဝေးရာ ဆိတ်ငြိမ်ရာကို ပိုမိုသဘောကျတတ်၏။
အကန့်အသတ်နှင့် နေထိုင်လုပ်ကိုင် တွေးတော ကြံစည်တတ်၏။ တာဝန်ယူလိုတတ်၏။ ထမ်းလိုတတ်၏။ (ခ)အုပ်စုသမားတို့မှာမူ
တာဝန်ယူလိုစိတ်ထက် …လွတ်လပ်စွာတွေးတောကြံဆ လုပ်ကိုင်လိုတတ်၏။ထို့ကြောင့်ပင်လျှင် ယင်းအမည်ရှငနှစ်မျိုးမှာ တစ်ယောက်တစ်လမ်းဆီကဲ့သို့ …လျှောက်လှမ်းမညီနိုင်အောင်ကွာဟနေရတတ်ပေသည်။ထို့ကြောင့် ယခု အတွဲကို လူကြီးနှင့်ကလေးအတွဲ ဟု အမည်ပေးလိုက်ပါသည်။
လူကြီးနှင့် လူငယ် အတွဲအကြောင်း
(၂) ဒီတစ်ခုကတော့ နာမည်အဖျားစာလုံး တနင်္လာ နဲ့ နာမည်အဖျားစလုံး ကြာသာပတေး ရှိသူတို့အတွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းဆိုပါတော့။ ဒီအတွဲကိုတော့ လူကြီးနှင့်လူငယ်အတွဲလိုအမည်ပေးလို့ရ မယ်ထင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ဒီလိုနာမည်ရှင်အတွဲမျိုးတွေဆိုပါတော့။
မိုးမြင့် နှင့် သူဇာခင်၊ ကျော်ကျော် နှင့် မူယာဖြိုး၊ နီလာခိုင် နှင့် မင်းမင်း၊ ဇော်သန့်ကို နှင့် မျိုးမမ စသည်အားဖြင့်အတွဲလေးတွေဆိုကြပါစို့။
နာမည်အဖျားစာလုံး ကြာသာပတေး (ပ၊ဖ၊ဗ၊ဘ၊မ) (က)အုပ်စု နှင့် နာမည်အဖျားစာလုံး တနင်္လာ (က၊ခ၊ဂ၊ဃ၊င) (ခ) အုပ်စု တို့အကြောင်း …………………..
(က)အုပ်စုလို့ နာမည်ပေးထားတဲ့နာမည်အဖျားစာလုံးကြာသာပတေးသမားတွေက သဘောထားကြီးတတ်တာများပြီးသူတစ်ပါးကို ကယ်တင်လို
ဖေးမပေးလိုတဲ့စရိုက်လည်း အနဲနဲ့အများရှိကြသူတွေမို့ …ကလေးဆန်တဲ့ (ခ)အုပ်စုနာမည်အဖျားစာလုံးတနင်္လာသမားတွေကို ခွင့်လွှတ်သီးခံပေးနိုင်ကြတာများပါလိမ့်မယ်။
(က)အုပ်စုသမားတွေက….ကြီးကြီးမားမားတွေးတောကြံစည်တတ်ပြီး၊ (ခ) အုပ်စုသမားတွေက ..တစ်ခါတစ်ခါကလေးကလားလုပ်ကိုင်
တတ်တာတစ်ခုတော့ ပြောစရာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အများစုကတော့အဆင်ပြေတဲ့အတွဲလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ပညာပေးလိုသူနဲ့
ပညာယူလိုသူအတွဲမျိုးလည်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ အားငယ်တတ်သူ နဲ့အားပေးတတ်သူအတွဲလို့လည်းဆိုနိုင်ပါတယ်။ လွတ်လပ်မှုကို ကြိုက်တဲ့
သူတွေနဲ့နားလည်ပေး သဘောထားကြီးပေးနိုင်သူ အတွဲမို့ 70%လောက်သင့်တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ဗျား။
တစ်ကယ်တော့ သည်ဆောင်းပါးလေးက အားလုံးကို ပျော်ရွင်စေလိုခြင်းသာအဓိကဖြစ်ပါသည်။ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ နစ်နာစေလိုသော စိတ်အလျဉ်းမရှိရပါကြောင်း။ ဗေဒင်ပညာရပ် သဘောဖြင့် မိမိချစ်သူကို ထောက်လှမ်းရလွယ်ကူနိုင်အောင၊် ..ဗေဒင်ပညာကိုနက်နက်နဲနဲ လိုက်စား ထားစရာ မလိုပဲ အလွယ်တစ်ကူ ကြည့်ရှုသိရှိနိုင်စေရန် ရယ်ဒီမိတ်သက်သက်လုပ်ပေးခြင်းသဘောမျိုးလည်းဖြစ်သည်။ မိမိတို့၏ချစ်သူ(၀ါ)ချစ်ချစ်များတွင်.. နာမည်လေးတစ်ခုလောက်တော့မလွဲမသေရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့်.. ဘယ်သူမဆို လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုနိုင်ကြလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်မိပါကြောင်း။
(၁) တနင်္ဂနွေနံ ( အ၊ဥ ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
နာမည်အဖျားစာလုံးများကို မှတ်သားထားပါ။ ပြီးလျှင်ဆက်ဖတ်ပါ။
သည်ချစ်ချစ်တို့ကတော့……ဂုဏ်ယူရတာမျိုးကို နှစ်သက်တယ်။သူတို့ဘ၀ဦးတည်ချက်က နံပတ်တစ်ဖြစ်ဖို့ အဓိကပါပဲ။ ဆုရမှာ ၊ ချီးမြှင့်ခံရမှာမျိုးတွေကို သူတို့က နှစ်သက်လေ့ရှိကြတယ်။ သူတို့ကို ချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောဆိုမိတာမျိုးမပြောနဲ့ အပြစ်နဲနဲတင်လိုက်ရင်တောင် …မကြိုက်တတ်ကြဘူး။ ဖြစ်နိုင်ရင် သည်ချစ်ချစ်မျိုးက များများချီးကျူးပြောဆိုပေးဖို့လိုပါတယ်။ မြောက်ပင့်ပြောနေမှန်းသိသည့်တိုင်အောင် သူတို့က အမြောက်သိပ်ကြိုက်တတ်ပါတယ်။ စိတ်ချလက်ချ သူတို့ရဲ့အရည်အသွေးတွေကိုရွေးပြီး ချီးကျူးပေးပါ။ တစ်ဖွဖွပြောပေးပါ။အဲဒါဟာ သူတို့မခွာနိုင်ဘဲ စွဲနေစေမယ့် ပီယဆေးကြီးတစ်ပါး ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က တစ်ခါတစ်လေ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်သလိုမျိုး လုပ်ကိုင်တတ်ပါလိမ့်မယ်။
ဒါကိုတော့သီးခံပေးနိုင်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အားကိုယ်ကိုးတတ်သူတွေကို အထင်ကြီးတတ်ပြီး၊ များသောအားဖြင့်တော့ သည်ချစ်ချစ် ကလေးမျိုးတွေက စာအုပ်စာပေနယ်ပယ်နဲ့ နီးစပ်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒါလေးကိုလည်း အရေးတစ်ယူပြုမှတ်သားပြီး မွေးနေ့ဘာညာတွေမှာ အမှတ်တရအဖြစ် စာအုပ် စာတမ်းလေးတွေ။ စာရေးကိရိယာလေးတွေ လက်ဆောင်ဝယ်ပေးသင့်တာပေါ့။ သူတို့ထဲက
တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း အားကစားဘက်ကို စိတ်ဝင်စားသူလေးတွှေဖြစ်နေတတ်ပြန်ပါတယ်။ ဒါဆိုကိုယ်ကလည်း
အားကစားတစ်ခုခုကိုအကြောင်းပြပြီး သူနဲ့ပိုနီးစပ်ပူးပေါင်းလို့ရတာပေါ့။ တစ်ချို့ကျပြန်တော့လည်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှုကို အလွန်အင်မတန်မှကို
နှစ်သက်သူမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါကို ကိုယ်ကမသိဘဲ……အဲဒီ့လိုချစ်ချစ်မျိုးရှေ့မှာ လက်သည်းကြီး တစ်ကျိကျိကိုက်နေတာတို့…၊ နှာခေါင်းနှိုက်တာတို့၊ ချွေးတွေသံတွေနဲ့သူ့ကိုဖက်နမ်းမိတာတို့ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်အရေးကတော့ ရင်လေးဖွယ်ရာ ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဆရာတို့ရေ ဟုတ်ဟုတ် မဟုတ်ဟုတ်ပေါ့…..သူတို့ကို တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်၊ ပိတောက်ဆိုပိတောက်လို့ လျှောက်မပြောချင်နေပါ။ မင်းနဲ့တူတဲ့ နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ကိုယ့်ဘ၀မှာ ဘယ်သောအခါမှ မရှိနိင်တော့ပါဘူး ဆိုရင်တော့…..သူတို့က ကိုယ့်ဆရာတို့ကို အမှတ်ပြည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။ ကတိတည်မှတော့ ကြိုက်တယ်ခင်ဗျ။ ကတိတွေ အထပ်ထပ်တောင်းတတ်ပါတာ သူတို့ပေ့ါ။ စည်းကမ်းတွေကိုလည်း ခဏခဏ စကားထဲထည့်ပြောတတ်တာသူတို့ပါပဲ။ များသောအားဖြင့်ကတော့ စည်းကမ်းရှိရှိနေတတ်သူမျုိုးကို သူတို့က ပိုသဘောကျ တတ်လေ့ရှိပါတယ်။ သိပ်ပြီး ရုပ်ရှင်ဝါသနာပါတဲ့ချစ်ချစ်ကလေးများဆိုရင်တော့မောင်ရင်ရေ…ရုံတင်တင်ခြင်း ပထမဆုံးရက် မှာ ပြနိုင်လို့ကတော့….အခွင့်ထူးတိုးမြှင့်ရရှိဖို့ စရံတစ်ဝက်ခြေ ပြီးသားလိုပါပဲ။ အနှစ်ချုပ်နဲနဲပြန်စုပေးပါ့မယ်။
သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေကိုချစ်ချစ်တော်မိမယ်ဆိုရင်တော့……ကျန်းမာရေး၊ အားကစား၊ စာပေ၊ ကတိ၊ ချီးကျူးပေးဖို့၊ စည်းကမ်း၊ …စတာလေးတွေကို သတိပြုမိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ဗျာ။
ဥပမာအားဖြင့်တော့ …….ဒီလိုနာမည်မျိုးလေးတွေ.. လင်းထက်အောင်၊ သီတာဦး၊နှင်းသီရိအေး၊ မျိုးသူရအောင်၊ စတဲ့အမည်ရှင်ချစ်ချစ်မျိုးလေးတွေ ဆိုပါတော့…..။
(၂) တနင်္လာနံ ( က ၊ ခ ၊ ဂ ၊ ဃ ၊ င ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
ဒီတစ်ခါကတော့…..နာမည်အဖျားစာလုံးကို က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ၊ င နဲ့ မှည့်ခေါ်ထားတဲ့ချစ်ချစ်တို့အကြောင်းပါ။
သူတို့ကတော့ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အကူအညီပေးတာမျိုး၊ တစ်ခြားသူတွေရဲ့ ကဏ္ဍတွေကို ကြားဝင်ဆောင်ရွက်ပေးရတာမျိုး
မကြာမကြာလုပ်လေ့ရှိကြတဲ့အတွက် ….သူတို့နဲ့ချစ်သူလေးများဖြစ်မိကြမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်း သူနဲ့အတူ ကူညီတတ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က..များသောအားဖြင့်…စိတ်ကြည်လင်စရာလေးတွေ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးတွေပဲနေတတ်ထိုင်တတ်၊လိုလားတတ်ကြတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့ကို တာဝန်တွေ ပရက်ရှာတွေ၊ စိတ်ညစ်စရာတွေ သွားရင်ဖွင့်ပြလို့မသင့်လျော်ဖူး။ သူတို့ကအဲဒါဆို ရှောင်ကျဉ်သွားတတ်တယ်။
သူတို့ကို ချစ်သူအဖြစ် အိမ်ထောင်ဖက်အဖြစ် ရွေးခြယ်မယ်ဆိုရင် ကြိုသိထားဖို့အဓိကအရေးကြီးတာ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ တခြားမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို ပျော်အောင်ထားနိုင်မလားလို့သာ …ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပထမဦးစွာ မေးကြည့်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့က အများအားဖြင့် တော်ရာမှာထက်
ပျော်ရာမှာမွေ့တတ်ကြတဲ့သူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ကလေးကလားဆန်တတ်သလို…….သူတို့ရဲ့ ဘ၀ဦးတည်ချက်ကလည်း မကြာခဏဆို သလို ပြောင်းလည်းနေတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ အရမ်းစိတ်ဓါတ်ကျ နေတတ်သလို တစ်ခါတစ်ခါအရမ်းစိတ်ရွှင်မြူး နေတတ်တာလည်း
သူတို့လေးတွေပါပဲ။ တစ်ကယ့်ကို လွတ်လပ်ပေါ့ပါးမှုကို နှစ်သက်တတ်သူတွေဖြစ်ပြီး၊ ချုပ်ချယ်မှုကို လုံးဝကြောက်တတ် သူတွေလည်း ဖြစ်တဲ့အတွက်၊ အနှောင်အတွယ်တွေ ဖိနှိပ်မှုတွေကိုသူတို့က ခါးသီးတတ်ပါတယ်။ သူတို့က ..ဘယ်အရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ် စကောစက
အခြေအနေမျိုးတွေကို နှစ်သက်လေ့ရှိတတ်ကြတဲ့အတွက်………သူတို့ကို ချစ်ခွင့်ပန်တဲ့အခါမှာလည်း အများအားဖြင့် …မပြတ်မသားဖြေလေ့ ရှိကြပါတယ်။ ဟိုလိုလို သည်လိုလိုလုပ်လ့ဆိုပြီး …ဒေါမကန်လိုက်ပါနဲ့။ သူတို့ရဲ့ သဘာဝမို့ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးနိုင်မှပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်ခါ ဂွကျတာမျိုးလေးတွေကတော့ …… သူတို့ကို လေးလေးနက်နက် တွေးခိုင်းနေခိုင်း လုပ်ကိုင်ခိုင်းရ ခက်တာလေးတွေပါပဲ။ …………သူတို့က သိပ်ဟဲဗီးဖြစ်တာတွေကိုမှ လက်မခံနိုင်တာကိုး။ ဒါကြောင့် လေးနက်စွာ သဘောထားဖို့ဆိုတာ သူတို့အတွက်
သာမန်ကနေ ကြီးမားတဲ့အခက်အခဲမျိုးတွေအထိဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်လို့များကိုယ်က ဒီလိုနာမည်အဖျားစာလုံးရှိတဲ့ ချစ်ချစ်ကလေးတစ်ယောက်ကိုနီးစပ်ဖို့ကြိုးစားတော့မယ် ဆိုရင်တော့ …….သင့်ကိုယ်သင် ..ဦးစွာဒီလိုနေပေးတတ်ဖို့လိုပါတယ်။
ပျော်ပျော်ပါးပါး ပေါ့ပေါ့ပါးပါးစတိုင်မျိုး ဖန်တီးထားပါ။ ကျူတာဆရာ/ဆရာမ စတိုင်မျိုး ၊စည်းကမ်းသေ၀ပ်သူ ပုံစံမျိုး ဖြစ်နေလို့မရပါဘူး။ စိတ်ချမ်းသာစရာအကြောင်းတွေ။ ဟာသလေးတွေ။ ရုပ်ရှင် အနုပညာ အကြောင်းတွေ …….အသင်းအဖွဲ့ဆိုင်ရာကဏ္ဍလေးတွေ၊ သင်တန်း နဲ့ဆိုင်တဲ့ စကားလေးတေ.ွ ……..ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့ သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရင် ပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။သြော်.. ဖြစ်နိုင်ရင် သူတို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါ အရောင်မှိုင်းမှိုင်းကြီးတွေထက်အရောင်လွင်လွင်လေးတွေကို ပိုဝတ်ဆင်သုံးစွဲသင့်တယ်။ သူတို့နဲ့ ရည်းစားဖြစ်တဲ့အခါမှာ တတ်နိုင်သလို အလုပ်အားရက် ကြားရက်ကလေးတွေ ဖန်တီးပြီး……… ရေနဲ့နီးစပ်တဲ့ နေရာမျိုးလေးတွေမှာ ….ချစ်သူနှစ်ဦး အနားယူပေးသင့်တာပေါ့။ (
ရေထဲတော့မခုန်ချနဲ့နော်။ တရားခံ အနော်မပါဘူး။) သူတို့က မီဒီယာကဏ္ဍတွေကိုလည်းအရမ်း စိတ်ဝင်စားတတ်ပါတယ်။ ဟိုဘက်ကနေ
သည်ဘက်ကို …ကူးပေးဖို့က သူတို့ဝါသနာပေ့ါ…။ အောင်သွယ်တို့ ..ဂျွိုင်းပေးတာတို့ကိုလည်း အလျဉ်းသင့်သလိုလုပ်တတ်ကြပါသေးတယ်။
အဲလိုလုပ်ပေးရင်းက ….ကိုယ့်အနေနဲ့ အထင်လွဲစရာမျိုးလေးတွေ လာလာပြီးကြုံခဲ့ရင်လည်း …..သူ့သဘာဝကို နားလည်ပေးပြီး…ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်ဖို့ လိပုါတယ်။ ကဲအနှစ်ချုပ်ပြန်စုပေးပါ့မယ်။ ………………
သူတို့လို နာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေကိုချစ်ချစ်တော်မိမယ်ဆိုရင်တော့….ကိုယ်တိုင်ကလည်း ပျော်တတ်ဖို့လိုတယ်။ သူတို့ကိုလည်းပျော်အောင် ထားတတ်ရပါမယ်။ တာဝန်တွေ၊ တားမြစ်တာတွေ ….အရမ်းများတာနဲ့ သူကသင့်ကို ရှောင်ရှားဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်။ စိတ်ညစ်စရာတွေ သိပ်မပြောမိပါစေနဲ့။ ကလေးကလား လုပ်တာမျိုးကိုနှစ်ခြိုက်တတ်သူတွေ ဆိုတော့..ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကလေးလို သူ့ကို ဆက်ဆံနိုင်ရင်
ပိုကောင်းပါတယ်။ ….အရမ်းမချုပ်ချယ်မိအောင် ကြိုးစားမှတော်ရုံကြမယ့် ချစ်ချစ်မျိုးလေးတွေပါ။ ဟဲဟဲ ….လွှတ်သာထား လိုက်တော့လို့ပြောရမလိုပါပဲ။ …..နဲနဲတော့ သီးခံပေးဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်းသူလောက်ချစ်တတ်တာ…. နုညံ့သိမ်မွေ့တာ မရှိဘူးထင်ရလောက်အောင် …ချစ်ဖို့ကောင်း တဲ့ချစ်ချစ်ကလေးတွေဆိုပါတော့။
ဥပမာဆိုရရင်တော့ ဒီလိုနာမည်မျိုးလေးတွေပါ။ လင်းလင်းခိုင်၊ သူရကျော်၊ သိမ့်သိမ့်ခင်၊ချမ်းငြိမ်း ………စတဲ့အမည်မျိုးလေးတွေဆိုပါတော့။
(၃) အင်္ဂါနံ (စ ၊ ဆ ၊ ဇ ၊ ဈ ၊ ည ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း.
သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေနဲ့ ချစ်မိထားသူတွေအဖို့ကတော့….ရုတ်ရုတ်ရုတ်ရုတ်မလုပ်ဝံ့အောင်ပါပဲ။သူတို့က သိပ်လျှင်သလို၊ စုံစမ်း ထောက်လှမ်း ရတာကိုလည်း ၀ါသနာထုံတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို(မူလမဟာဘုတ်ဇာတာအရ)အင်္ဂါဂြိုဟ်အရမ်းအားကောင်းတဲ့အနေအထားရှိသူတွေ
ဖြစ်ခဲ့ရင်…ဇိုးဇိုးဇတ်ဇတ်နဲ့ ကိုယ့်ကိုဦးဆောင်သွားမယ့်သူမျိုးတွေအဖြစ်တွေ့ကြရပါမယ်။ သူတို့က စိတ်မြန်သလို အီးလေးဆွဲနေတာ၊
စောင့်ဆိုင်းရတာတွေကိုလည်း အရမ်းမုန်းတတ်ပါတယ်။ နာရီကို ရှေ့နဲနဲစောပြီးလှည့်ထားတတ်တာ သူတို့ပေါ့။ သူတို့ကို ..တားမြစ်ပိတ်ပင်ရတာ အရမ်းခက်ပါတယ်။ ..အဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ ဖြောင်းဖြောင်းဖျဖျ ပြောဆိုပေးရုံလောက်ပဲလုပ်ပါ။ သူတို့က အနိုင်ယူချင်တယ်။ယှဉ်ပြိုင်လိုစိတ်လည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တစ်ကယ်လို့များ ဒီလိုချစ်သူလေးမျိုးရထားပြီး..သူ့ကို တစ်ခြားတစ်ယောက်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ပြပြီးဝေဖန် အပြစ်တင်တာမျိုး လုပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့.နောင်ရေးအခြေအနေက ရင်လေးစရာဖြစ်သွားနိုင်တာမို့ တော်တော်ဂရုစိုက်ရှောင်ကျဉ်ပါလို့ပဲ သတိပေးရပါမယ်။
ဒီလိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေဟာ စိတ်မြန်သလို၊ စိတ်ဆတ်စိတ်တိုမှုလည်း ရှိတတ်ကြပါတယ်။ရုတ်တရက် ဖျတ်ကနဲ ကောက်ခါငင်ခါ လုပ်တတ်လေ့ရှိပြီး၊
အရမ်းသေချာတာကတော့..သူတို့မှာ ကိုယ်ပိုင် စံသတ်မှတ်မှု ပေတံတွေ ရှိနေကြတာပါပဲ။ ဒီလို စံသတ်မှတ်မှုပေတံတွေဟာ…၊ သူတို့ရဲ့ ပညာရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊အပြင်..အိမ်ထောင်ဖက်ရွေူးခြယ်ရေးကဏ္ဍမှာပါ..ရှိနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်.သူတို့နဲ့ချစ်ကြိုးသွယ်မိတဲ့ မောင်မောင်မမ တို့အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ပေတံတွေကို လိုက်မီ နေခြင်း၊ သူတို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံရည်စံသွေးမှာ အမြဲတည်နေခြင်း မျိုးရှိနေဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ စကေး မကိုက်ရင်တော့ အပြေးလိုက်တာတောင်လွယ်မယ်မထင်ပါဘူး။
(ကြည့်ပါလား..သူနော် ဇွတ်ပ)ဲ အဲလိုမျိုးမကြာခဏဟန့်ရတာ သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေပါ။ ဇွတ်တရွတ်လုပ်တာ၊ သူတို့ကစပြီး ကျူးကျော် တတ်တာ၊တစ်ခါတစ်လေ မိုက်မိုက်ကန်းကန်း လုပ်ဆောင်တတ်တာ၊ မာနကြီးတာ၊ တစ်ခါတစ်လေ..ရိုင်းရိုင်းပြပြဆက်ဆံတတ်တာ၊ ….တစ်ခါတစ်လေ စွန့်စွန့်စားစားလုပ်တတ်တာ၊ အလျင်လိုတတ်တာ၊အစရှိတဲ့ဂုဏ်အရည်သွေးတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတတ်တဲ့ ချစ်ချစ်အမျိုးအစားပဲဆိုကြပါစို့။ သူတို့ရဲ့လက်သုံးစကားကတော့ အရည်အသွေး ပဲဖြစ်ပြီး၊ ကွာလတီမန်း ကွာလတီလေဒီတွေ လို့တောင် ခေါ်နိုင်သူတွေပါ။ လက်ရဲဇက်ရဲ နိုင်တာလည်းသူတို့ပါပဲ။ ဒီတော့ သူတို့ရဲ့ချစ်ချစ် လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့..နဲနဲတော့ သတိထားဖို့လိုပါမယ်။ ကိုယ်က မိန်းကလေးဆိုရင်လည်း ..လက်ရဲဇက်ရဲနိုင်တဲ့သူတို့လို..ချစ်ချစ်မျိုးက…၊ ဟိုဒင်း..ဟုတ်ကဲ့။ သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ်ကယောကျာ်းလေးဆိုရင်တော့…လက်ရဲဇက်ရဲ ချစ်ချစ်လေးရဲ့.ဆွဲဆိတ်တာ၊ ထုထောင်းတာ။ ဗိုက်ခေါက်လိမ်တာ၊
စသည်ဖြင့်..တော်တော်များများကို ခံရဖို့များတာကြောင့်…အရှောင်အတိမ်းတတ်ဖို့ လိုပါတယ်။
အနှစ်ချုပ်ပြန်စုပေးပါ့မယ် …..ဒီလိုနာမည်မျိုးနဲ့ချစ်ချစ် တစ်ယောက်လောက်နဲ့ဆုံဆည်းဖို့ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့……..အရည်အသွေး နံပတ်တစ်ပါ။ စုံစမ်းထောက်လှမ်းမယ့် သူမျိုးမို့…အမှားလုပ်ထားတာ၊ ဖုံးဖိဖို့လိုတာတွေကို ..၊ ဖုံးမှာဆိုရင်လည်း ပိပိရိရိ သေသေသပ်သပ်နဲ့ဖြစ်အောင် တင်ကြိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပါတယ်။ သိပ်မနောက်ကျစေပါနဲ့။ ဘာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ နောက်ကျတာ။ တောကျတာ၊ ဂိုက်ဆိုက်က ခေတ်မမီတာ ၊ မော်ဒယ်အောက်တာမျိုးတွေကို မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ပါ။ အဲဗားအပ်ဒိတ် ဖြစ်နေဖို့လိုတဲ့ချစ်ချစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
သြော်. ဥပမာအားဖြင့် ဒီလိုနာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေဆိုပါတော့………။ အေးအေးစိုး၊ခင်ခင်ဆွေ၊ စိုးမင်းဇော်၊ လင်းဝေဇင်၊ ပြည့်စုံ၊ သန်းထိုက်ညွန့်။
(၄) ဗုဒ္ဒဟူးနံ (ယ ၊ ရ ၊ လ ၊ ၀ ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေနဲ့ ချစ်မိထားသူတွေအဖို့ကတော့… နားညီးဖို့သာပြင်ထားတော့လို့ ပြောရမလိုပါပဲ။
သူတို့က စကားပြောရတာကို သိပ်ခုံမင်ကြတတ်တယ်လေ။ တစ်ချို့ကျတော့လည်းမပြောရင် မြုံစိစိ၊ အေးအေးလေး၊ ပြောလည်းပြောရော
..၀ီခေါ်ပြီးမရပ်တော့တာမျိုး..တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ သူတို့က..တစ်ခုခုကို ပြုပြင်ပေးရတာကိုဝါသနာထုံတတ်သလို၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူများကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပြုပြင်ချင်တဲ့စိတ်အာသီသလည်း ရှိတတ်ကြသူတွေမို့၊ သင်သာသူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေကို ချစ်ချစ်တော်မိရင်..သင့်ကို
ပြုပြင်ခိုင်းတာတွေလုပ်လာမယ်ဆိုတာ ကြိုရိပ်မိထားဖို့လိုသလို၊သူ့အလိုကျလိုက်လျောညီထွေပြုပြင်နေထိုင်ပေးဖို့လည်း လိုအပ်မယ် လို့ကြိုသတိပေးပါရစေ။ သူတို့ထဲကတစ်ချို့သောချစ်ချစ်ကလေးတွေကတော့…တစ်ကယ့်လူဆိုးနာမည်တွင်နေတဲ့… ပတ်ဝန်းကျင် အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ နာမည်ဆိုးတွင်နေတဲ့..ဖူးစာဖက်မျိုးကို တမင်ရွေးခြယ်ပြီး၊ ပြုပြင်ပေးဖို့ ကြိုးစားတတ်ကြပြန်ပါသေးတယ်။ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရခြင်းဆိုတာ
သူတို့ရဲ့အဓိက ဦးတည်ချက်တစ်မျိုး ဖြစ်တာကြောင့်၊ သူတို့ကိုစကားကောင်းကောင်း ပြောပေးတတ်ဖို့လည်း အရမ်းလိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့အတွက် စကားပြောဖော်ဆိုတာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အရာပဲဆိုပါစို့။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့စကားကောင်းကောင်း ပြန်ပြောနိုင်ဖို့အတွက်..သူတို့စိတ်ဝင်စားမယ့်
အကြောင်းအရာလေးတွေကို လည်း ၊ ရှာဖွေလေ့လာထားမယ်ဆိုရင် ..အရမ်းကို အဆင်ပြေနိုင်တာပေါ့။ သူတို့က များသောအားဖြင့် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေ၊ အမူအယာလုပ်ပုံတွေကိုလည်း စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ ဒါလည်း သတိပြုထားသင့်ပါတယ်။ တစ်ချို့သော သူတို့ထဲက ချစ်ချစ်တို့ကတော့ ဥာဏ်ရည်ဥာဏ်သွေး နဲ့ အတွေးအခေါ်ပိုင်းတွေကို အလေးအနက်ထားတတ်ကြပြန်တယ်။
ဒီလိုမျိုး ချစ်ချစ်လေးတွေနဲ့ ဆုံဆည်းခဲ့မယ်ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဘက်က .၊ နောလေ့ရ်ှပိုင်းမှာ ..ထက်မြက်နေဖို့လိုပြန်ရောဗျ။
ဟူးးးးးးးးးးးး ။ ကဲ သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေနဲ့ချစ်ချစ်တော်ဖို့ စိတ်ကူးများရှိကြရင်တော့.တော်ကီကောင်းဖို့က နံပတ်တစ်ပဲဗျို့။ တော်ကီကောင်းလေ
သူတို့ကအကြိုက်တွေ့လေပါပဲ။ အပြုသဘောဆန်တဲ့ချစ်သူမျိုးလေးတွေလို့လည်းပြောလို့ရတာမို့….သူတို့က ဘယ်အရာကိုပဲပျက်ပျက်
အလွယ်တစ်ကူပစ်ထားလိုက်တာမျိုးကိုလည်း မနှစ်သက်တတ်ဖူး ဆိုတာကိုယ်ကသိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဖိနပ်ကလေးပြတ်တာကအစ… စီးလာတဲ့
ကားပျက်တာအဆုံး၊ ကိုယ့်ဆရာက ယောကျာ်းလေးဆိုရင်တော့ ..ချစ်သူရှေ့မှာ ဟိုကလိသည်ကလှည့် လုပ်ကြည့်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ဖိနပ်ပြတ်ခဲ့ရင်လည်း တွယ်ချိတ်ကလေးနဲ့ ပြုပြင်ပေးလိုက်တာမျိုး လုပ်ပေးနိုင်လို့ကတော့….အမှတ်တွေတစ်လှေကြီး ရမှာကျိန်းသေပါပဲ။
နောက်တစ်ခုကတော့ အပေးအယူ အလဲအလှယ်လုပ်တတ်တဲ့သဘာဝစရိုက်တစ်မျိုးပါ။ ဒါကို သိထားဖို့လည်း လိုပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ သဘာဝမှာ ၊ သူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက်မှာကို အဲဒါမျိုးက ပါလာပြီးသားဖြစ်နေတာပါ။ အရောင်းအ၀ယ်နဲ့ ကုန်သွယ်မှုဆိုင်ရာ…အခြေခံစိတ်တစ်မျိုးလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဖလှယ်ရတာ၊ အလဲအလှယ်လုပ်ရတာကို ၀ါသနာထုံတတ်တဲ့ သူတွေမို့။ ( ဟိုနေ့ကလိုမျိုးနောက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုရင် …ချစ်လည်း နောက်ကို မောင်မကြိုက်တဲ့ ဟိုဥစ္စာကို မလုပ်တော့ဘူးနော်) ဆိုတာမျိုး …အလဲအလှယ်သဘောမျိုးနဲ့လည်း
တောင်းဆိုတတ်ကြတာကို ကြိုတင်သိထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ ကဲ …နဲနဲ အနှစ်ချုပ်ပေးပါ့မယ်။ အဓိကအနေနဲ့ သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေကို
ချစ်ချစ်တော်မိမယ်ဆိုရင် စာပေဗဟုသုတကြွယ်ဝဖို့လိုသလို၊ စကားပြောကောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ အထူးသဖြင့် …ဆွေးနွေးပေးတာ၊
အယူအဆအတွေးအခေါ်ခြင်းဖလှယ်ပေးရတာလေး တွေကို အထူးစိတ်ပါဝင်စားတတ်သူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက်…………၊
အစိမ်းသက်သက်ကနေ စပြီးချဉ်းကပ်မယ်ဆိုရင်တောင်မှ….စကားစမြည်ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်း တစ်ခုခုနဲ့ဝင်ရောက်ချဉ်းကပ်တာဟာ အကောင်းဆုံးဖြစ်မှာပါ။ တော်ကီ ကောင်းဖို့ လိုတယ်ဗျို့။ တော်ကီ….တော်ကီ၊ အင်း တော်ကီချစ်ချစ်လို့ပဲဆိုကြပါစို့ရဲ့။
ဥပမာအားဖြင့်တော့ သည်လို နာမည်ရှင်မျိုးလေးတွေပေါ့။ နွယ်နွယ်ဝင်း၊ အောင်လင်း၊ကျော်ဇေယျာ၊ မင်းဇော်ဝေ။ လင်းလင်း၊ ဖြူလဲ့။
(၅) ကြာသာပတေးနံ (ပ၊ ဖ၊ ဗ၊ ဘ၊ မ ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
သူတို့လို နာမည်ရှင်တွေကို စိတ်ဝင်စားမိမယ် ..ချစ်သူအဖြစ် ရွေးခြယ်မိမယ် ဆိုရင်တော့… ဘာပဲလုပ်လုပ် သေးသေးမွှားမွှားလေးတွေ တွေးတာကြံတာ လုပ်ပြတာကို သူတို့က မနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး ။ နောင်ခါလာနောင်ခါဈေး ပဲသဘောထား လောလောဆယ်တော့ ကြီးကြီးမားမား ကြံစည်တွေးတော လုပ်ကိုင်ပြလိုက်ပါ။ သူတို့က ဗြစ်စိဗြစ်စိလုပ်တာ ဝေဖန်အပြစ်တင် တာမျိုးတွေကိုလည်းမနှစ်သက်တတ်သူတွေဖြစ်တယ်။အားနည်းနေသူတွေကို ဖေးမကူညီ ကယ်ဆယ်လိုစိတ် ရှိတတ်သူတွေမို့ ၊ တစ်ခုခုကြောင့်
သူတို့စိတ် အလိုမကျ ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ၊ သို့တည်းမဟုတ် ကိုယ့်အပေါ်မကြည်မသာဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာ ကိုယ့်မှာအခက်အခဲတွေကြုံပြီး
အားနည်းနေတဲ့အသွင်နဲ့ သူတို့ဆီက အကူညီကို တောင်းခံလိုက်တာ မျိုးကနေ ပြန်အဆင်ပြေသွားတတ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ဦးတည်ချက် ရည်ရွယ်ချက်တွေက ..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကြီးမားနေတတ်ကြတာမို့ ..သူတို့ကိုကိုယ်ကကြီးကျယ်ရန်ကော…တန်ရာတန်ရာမမှန်းဘူး စသည်ဖြင့်
ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဝေဖန်မိမယ်ဆိုရင်တော့ နောင်ရေးက ရင်လေးစရာအခြေအနေမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။မွေးနေ့လက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါ မှာတောင်သူတိ့အု တွက် ကိုယ်က ပေးမယ့်လက်ဆောင်ကို သေးသေးကွေးကွေး ပိစိလေးတွေ မရွေးမိအောင် သတိထားပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်
….ပန်းလှလှတွေ အများကြီး ပေးတာတို့ ၊ ၀က်ဝံရုပ်အကြီးကြီး ၀ယ်ပေးတာတို့ (ဥပမာပြောတာနော်)ဆိုရင် သူတို့က သဘောခွေ့တတ်ပါတယ် ။နောက်တစ်ခုကတော့ သူတို့က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်း နယ်ပယ်ကျယ်ပြန့်ပြီး ၊ ဗဟုသုတစုံလင်အောင် ရှာဖွေတတ်သူတွေလည်းဖြစ် တဲ့အတွက် ..ကိုယ်ကလည်း သူတို့နည်းတူ နီးစပ်အောင်နေတတ်ဖို့လိုသလို၊ သူတို့ရဲ့မိတ်ဆွေ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကဏ္ဍတွေကိုအရမ်းကာရော လိုက်လံ ပိတ်ပင်တာမျိုး မလုပ်မိဖို့လည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ဟိုလူနဲ့မပေါင်းနဲ့ သည်လူနဲ့ မဆက်ဆံနဲ့ ဆိုတာတွေက သူတို့ကို အထူးစိတ်ညစ်ညူးစေရ တတ်လို့ပါ။ သူတို့က သဘောထားကြီးတာ စိတ်နေမြင့်မားတာလူတွေကို ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်တာ ဒါမျိုးလေးတွေကို အထူး နှစ်ခြိုက်တတ်
မယ်ဆိုတာကိုတော့ ကိုယ်ကအမြဲသတိပြုမိနေဖို့လိုပါတယ်။တစ်ချို့ဆို သူတို့ကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုအခြေအနေနိမ့်နေပါစေ၊ သူတို့ရှေ့မှာ
အားနည်းနေသူမျိုးကိုတွေ့ခဲ့ရင် မနေနိုင်အောင်ဖြစ်ပြီး ကူညီတတ်ကြပါတယ်။ ဒါကိုကိုယ်က သူ့ကို ကြိမ်းမောင်းမယ် ၊ဂရုဏာဒေါသောဖြစ်ပြီး ကလော်တုတ်မယ်ဆိုလည်း သူတို့စရိုက်ကတော့ ပြောင်းလည်းသွားဖို့ မလွယ်ပါဘူး။အကယ်လို့များ သင့်ချစ်သူကအဲဒီ့လိုနာမည်ရှင်မျိုး ဖြစ်နေပြီး သင့်လိုပဲ အခြားတစ်ယောက်နဲ့ လည်း ငြိစွန်းပြီးနှစ်ယောက်ကြား ဗျာများရတဲ့အခြေအနေမျိုး ကြုံပြီဆိုရင်တော့ သေချာတာကအားနည်းတဲ့ဘက်ကို သူက ရွေးခြယ်လိမ့်မယ် ဆိုတာပါပဲ။ကောင်းပြီ။အနှစ်ချုပ် ပြန်စုပေးပါ့မယ် ….
ဒီလိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေကိုချစ်ချစ်တော်မယ်ဆိုရင်တော့သဘောထားကြီးခြင်း၊ကူညီကယ်ဆယ်တတ်ခြင်း၊ စိတ်နေမြင်မ့ားခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတ
ဥပမာအားဖြင့်တော့ သည်လိုနာမည်ရှင် မျုိးတွေကိုချစ်ချစ်တော်မယ်ဆိုရင်ပေါ့။ အောင်ပြည့်ဖြိုး၊ သူဇာမိုး၊ ယမင်းဖြူ၊ လင်းဝေမောင်၊
အောင်ကျော်ပိုင်၊ တိုးဆုပြည့်၊ ခင်သူဇာမိုး၊ စသည်အားဖြင့် ဆိုပါတော့။
(၆) သောကြာနံ ( သ၊ဟ ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
ဥပမာအားဖြင့် ဒီလိုနာမည်ရှင်လေးတွေကိုများ ချစ်ချစ် တော်မိကြမယ် ဆိုရင်… ၊လင်းသန့်၊ မိုးမြတ်သော်၊ ဆုဆုဟန်၊အေးမြသွင်၊ နွယ်နီစိုးဟန်၊ တင်မာသော်၊ ကျော်မိုးသူ စသည်အားဖြင့်ဆိုပါတော့။
ဒီလို နာမည်ရှင်တွေကတော့ ဥယျာဉ်မှုးနဲ့တူတဲ့ ချစ်သူမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကကဗျာ၊သဒ္ဒါ ပိုင်း တွေမှာ စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပြီး၊ ဘာပဲလုပ်လုပ်
သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့အတိုင်းတစ်သွေမတိမ်းဖြစ်တာမျိုးကိုမှ ကြိုက် တတ်တဲ့သူမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်။ ဒီနားက စာအုပ်တွေ ဘယ်နားသွားထား လိုက်တာလဲ။ ဟိုမှာချိတ်လေ အ၀တ် ကို ၊ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ ကို ဒီမှာထားရတယ်… စသည်အားဖြင့်စီမံနေရာချထားတတ်ပြီး ၊ အလှဆင်တတ်သူတွေလည်းဖြစ်တယ်။ သူတို့က သူတို့ချစ်သူကိုလည်း ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်စေ့ချင်တယ်။ ပါးစပ်ကထုတ်မပြောရင်သာမပြော ဘဲနေမယ် စိတ်ထဲကတော့ သူတို့စီမံတာကိုလက်မခံရင် ၀မ်းနည်း နေတတ်သူတွေလို့လည်း ဆိုနိုင်ပါတယ်။ နာမည်အဖျားစလုံးကို သောကြာဂြိုဟ်ပိုင်အက္ခရာ (သ၊ဟ) နှင့် မှည့်ခေါ်ထားသူတွေမို့ သူတို့ကိုအပျော်ကြိုက်သူ တွေလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်။ သီချင်းတွေ အနုပညာရပ်ပိုင်းတွေကိုလည်း နှစ်လိုတတ်ကြပါတယ်။
ဘ၀မှာဘယ် လိုဇိမ်ယူရမလဲ လို့ အမြဲ တွေးနေတတ်တာလည်း သူတို့ပေ့ါ။ သက်တောင့်သက်သာဖြစ်မှုကိုအစဉ်လိုလားတတ် သူများလည်းဖြစ်လို့ …သူတို့ကို မနားမနေ ဆောင်ရွက်ခိုင်းမိမယ်ဆိုရင် ချစ်မှုရေးရာမှာ ..အနှုတ်လက္ခဏာ ပြလာပါလိမ့်မယ်။သူတို့က ဘာကိုကြိုက်တတ်သလဲ ဆိုတော့ ..အစစအရာရာမှာ ဆွဲဆောင်ညှိ့ငင်အားကောင်းတဲ့ အကြောင်း အရာတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်သဘောကျတတ်ပါတယ်။ ကလေးဆန်တာ ရှေးဆန်တာ ခေတ်ဆန်တာ အဲဒါတွေအပေါ်မှာ သူတို့အချစ်က တည်ဆောက်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ကိုဘယ်လိုဆွဲဆောင်မှု ကိုယ့်မှာရှိမ လဲဆိုတာက အရေးအကြီးဆုံးပါပဲ။ သူတို့ကိုလက်ဆောင်ပေးတော့မယ် ဆိုရင် ခပ်ညံ့ညံ့ ပေါချောင်ကောင်းတော့ လုံးဝ စိတ်မကူးပါနဲ့။
ဖြစ်နိုင်သမျှ တန်ဖိုးကြီးဖို့တော့လိုမယ်။ မက်မောစရာတွေကို မက်မောတတ်တဲ့သူတို့ကို ချစ်မိရင် အပြစ်လို့တော့ မမြင်လိုက်ပါနဲ့။ အစကတည်းက မကြိုက်မိအောင်သာနေချင်နေပါ။ သူတို့က သူတစ်ပါးကို သိမ်းသွင်းတာ၊ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးတာမျိုးလည်းလုပ်တတ်ပါတယ်။ ဒါကို သင်က အသာငြိမ်ပြီး နေတတ်ဖို့ကလည်း လိုပါသေးတယ်။ဟိုလိုလေး နေနော် ဆိုလည်း အင်းအင်းပေါ့ဗျာ၊ (ရှေ့တင်တော့) ။ ကွယ်ရာကတော့
….မပျိုလော မပြောလိုပါဘူး မောင်တို့သဘော မတို့သဘောပေါ့။ ရှေ့တင်တော့ ကိုယ်က သူစီမံပေးတာကို လက်မခံတာတွေ သိပ်များလာရင် ..ချစ်ခြင်းမြဲဖို့ သိပ်မလွယ်ပါ။ ကဲ ဟုတ်ပါပြီ။ ..အနှစ်ချုပ်နဲနဲ ပြန်စုပေးပါ့မယ်။ သူတို့လို နာမည်ရှင်လေးတွေနဲ့ ချစ်ချစ်တော်ခဲ့မယ်လို့များ စဉ်းစား မိမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလည်းပိုပြီး သ ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အဲဗား စမတ်ဖြစ်လေလေ ကောင်းလေလေပါပဲ။
ဥယျာဉ်မှုးနဲ့တူတဲ့ချစ်သူမျိုးဖြစ်လို့ ကိုယ်ကလည်း သစ်ပင်ပန်းမန်လေးလို ငြိမ်ခံနေတတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲတွေ ၊ ကစားကွင်းတွေ၊
အပျော်ခရီးစဉ်တွေနဲ့လည်း သူတို့ကို စည်းရုံးဆွဲဆောင်ထားသင့်ပါတယ် ဆိုတာကို တင်ပြရင်း ချစ်ချစ်အကြောင်းတစ်စေ့တစ်စောင်း စာစု(၆) ကို နိဂုံးချုပ်အပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
(၇) စနေနံ ( တ၊ထ၊ဓ၊ဒ၊န ) – နာမည်အဖျားစားလုံးတို့၏ ချစ်ချစ်တို့အကြောင်း
ဥပမာအားဖြင့် …….နွယ်နွယ်ထွန်း၊ သွယ်သွယ်ထက်၊ မြင့်ဦးနိုင်၊ အာကာတိုး၊ သိမ့်သိမ့်နှင်း။ ဟန်နီ၊ ချိုဇင်ထက်။ စသည်အားဖြင့် အမည်ရှင်မျိုးတွေ ဆိုပါတော့။
သူတို့လို နာမည်ရှင်တွေကို ချစ်သူအဖြစ်ရွေးခြယ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ ..သင့်အနေနဲ့ တော်တော် သီးခံနိုင်စိတ်လေးတော့ မွေးရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့က ဝေဖန်တတ်တယ်။ အပြစ်တင်စရာရှိရင်လည်း မညှာဘူး။ ဟိုလိုမလုပ်နဲ့ သည်လိုမလုပ်နဲ့ ဟိုဟာမကြိုက်ဘူးဒါကို လက်မခံဘူး စသည်အားဖြင့် အငြင်းဝါကျကိုလည်း မကြာမကြာ သုံးလေ့ရှိသူတွေလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ သူတို့က ဘာပဲလုပ်လုပ် နဲနဲတော့ အစွန်းရောက်တတ်ကြ တယ်။ ပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်း သူတစ်ပါးကို ဖိအားပေးတတ်သူတွေမို့ သူတို့ကို ချစ်သူတော်မိမယ်ဆိုရင် …သင့်အနေနဲ့ ပေါ့ရွှတ်ရွှတ်လုပ်တာမျိုး လုံးဝရှောင်ပါ။အဖြစ်နိုင်ဆုံးလေးလေးနက်နက် ပြောဆို ဆက်ဆံပါ။ သူတို့က တာဝန်ယူတတ်သူ၊အလေးအနက် ထားတတ်သူ၊ တည်ကြည်သူ၊ ထူးထူးခြားခြား စရိုက်ရှိသူမျိုးကိုလည်းစိတ်ဝင်စားတတ်ကြပါသေးတယ်။ သိပ်ပြီး ခေတ်ရှေ့ပြေးလွန်းတာမျိုးကို သူတို့ကမနှစ်သက်တတ်ကြပါဘူး။ ပုံမှန် ရိုးရိုးလေးပဲ အေးအေးလေးပဲ သဘာဝ အတိုင်းလေးပဲကြိုက်တတ်တယ် ဆိုတာ သူတို့သဘာဝပါ။ သူတို့က ပရလောကနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားတွေ၊
လူမျိုးကွဲတွေထူးခြားဆန်းကြယ်တာတွေကိုလည်း သဘောကျ နှစ်ခြိုက်တတ်သူတွေလို့ယျေဘုယျ ဆိုနိုင်ပါသေးတယ်။တစ်ခုခုကို အခြေခံက စပြီး သိရှိနားလည်ရန် ကြိုးပမ်းနေတတ်ကြသူတွေလည်းဖြစ်လို့…သူတို့ကို အသေးစိတ် မရှင်းပြပဲနဲ့ ဘယ်အကြောင်းအရာကို မှ အလွယ်တစ်ကူ
လက်မခံတတ်ကြပါဘူး။ ဒါကို ကိုယ်က သတိပြုမိထားဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဘ၀လက်တွဲရေးပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်ခြားဘာကိစ္စမျိုးကိုပဲ တိုင်ပင်တိုင်ပင်..၊ သူတို့ကိုအသေးစိတ် အနုစိတ် သေချာရှင်းပြပေးမှသာ သူတို့က လက်ခံကျေနပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
လက်ဆောင်တွေဘာတွေပေးတေ့ာမယ် ဆိုရင်တော့ …ပစ္စည်းအကြီးကြီးတွေထက်သူတို့က ပိစိကွေးလေးတွေ အူယားစရာ ပေါက်စနလေးတွေကို
သဘောခွေ့တတ်ကြပါတယ်။ သူတို့ သဘောကျမယ့် လက်ဆောင်သေးသေးကွေးကွေးချစ်စရာလေးတစ်ခုလောက် သင့အ် နေနဲ့ ရှာဖွေ လက်ဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အမှတ်တိုးလာမှာ သေချာပါတယ်။ သူတို့ထဲက အချို့သော သူတစ်ချို့ကတော့ရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေ အိုးလ်မော်ဒယ်တွေကို စိတ်ဝင်စားတတ်ကြပြန်ပါတယ်။ပေါချောင်ကောင်း အဟောင်းဈေးက ပြန်ဝယ်လာတာမျိုးကိုလည်း ကြိုက်ချင်ကြိုက်
နေတတ်ကြပြန်ရောဗျ။ရာဇ၀င်ဆိုင်ရာ စာပေ ရုပ်ရှင် စတာတွေကိုလည်း သူတို့ထဲကအချို့သောနာမည်ရှင်တွေက သိပ်ကြိုက်နေတတ်တာ ကို တွေ့ရတတ်ပါတယ်။ အများစုကတော့ ကံကံ၏ အကျိုးကို လက်ခံ ယုံကြည်ထားကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် အကြောင်းအားလျော်စွာ သူတိုနဲ့တွေ့တဲ့ဆုံတဲ့အခါ ဗေဒင် အကြောင်း၊ သို့တည်းမဟုတ် ထူးဆန်းတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ၊ လျှို့ဝှက်နက်နဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေ
နဲ့ လောကုတ္တရာ အကြောင်းတွေကိုလည်း အလိုက်သင့် အရိပ်အခြေကြည့်ပြီး ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အနှစ်ချုပ်ပြန် လည်စုစည်းပေးပါမယ်။ သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေကို ချစ်ချစ်တော်မိကြမယ်ဆိုရင်တော့ ဝေဖန်တာကို ခံနိုင်ဖို့အရင်ဆုံး ကြိုးစားထားပါ။ အပြစ်တင်ရင်လည်း အချစ်အမြင်နဲ့ ပြုံးပြတတ်ပါစေ။သိပ်ပြီးအဆန်းမထွင်ပါနဲ့။ ရိုးရိုးယဉ်ယဉ်လေးနဲ့လည်း ဆွဲဆောင်လို့ ရနိုင်ပါတယ်။
လေးလေးနက်နက်သဘောထား ဆက်ဆံပေးပါ။ ဖိအားပေး ခံရရင်လည်း သူတို့ကို နားလည်အောင်ရှင်းပြပြီး ဖြေရှင်းပါ။ အစွန်းရောက်တတ်တဲ့သူတို့သဘာဝကို နားလည်နေမှ ကိုယ်ကလည်း သူကို့ ခွင့်လွှတ်နားလည်နိုင်ဖို့ လွယ်ပါမယ်။
ထူးထူးဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာလေးတွေ ပြောပြပေးပါ။ သို့မဟုတ် အဲဒီ့လို ထူးထူးဆန်းဆန်း အကြောင်းအရာတွေနဲ့ သူတို့ကို စည်းရုံးသိမ်းသွင်း
ဆွဲဆောင်နိုင်ပါတယ်။ အမြန် မလုပ်ပါနဲ့။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သူတို့က အနှေးသမားတွေပါ။ ဖြေးဖြေး မှန်မှန် နဲ့ သတိထား ပြီး လုပ်တတ်တာမျိုးကို ပိုနှစ်သက်တတ်သူတွေမို့ သင်က သိပ်ပြီးအမြန်ကြိုက်နေရင်လည်း အချိုးမပြေ ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ စိတ်ရှည်ပါ။ သီးခံပါ။ ဒါမှ သူတို့နဲ့ တွဲလို့ မြဲပါလိမ့်မယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သူတို့လိုနာမည်ရှင်မျိုးတွေနဲ့ ချစ်ချစ်တော်မိကြမယ်ဆိုရင်တော့ ….ဗေဒင် ဘာသာရေး စိတ်ပညာသမိုင်း ရာဇ၀င်ဆိုင်ရာအသိပညာ မျိုးတွေနဲ့ …ထူးဆန်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကို အနဲနဲ့အများ နားလည်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒါမှလည်း သူတို့ကိုချဉ်းကပ်ရတာပိုလွယ်ကူနိင်ုသလို သူတို့နဲလည်း ကြာရှည်လက်တွဲလို့ရနိုင်မှာပါ။
5 spots -II →